Ndeupi mutsauko pakati DataNumen Outlook Repair uye DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
Musiyano chete pakati pezvigadzirwa zviviri izvi ndezvekuti vanoshandisa rakasiyana dhata dhata, seinotevera:
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) inotora yakashata kana yakakuvara PST faira senge dhata dhata.
· DataNumen Outlook Drive Recovery(DODR) inotora dhiraivha kana dhisiki senge dhatabhesi. Iyo dhiraivha kana diski ndiyo nzvimbo yawakachengetera yako PST mafaera munguva yakapfuura.
Saka kana iwe uine yakaipa kana kukuvara PST faira iri muruoko, saka unogona kushandisa DOLKR kugadzirisa iyo faira uye kudzoreredza maemail mukati mePST faira. Kana DOLKR ikatadza kudzorera maemail aidiwa, uchiri nemukana wekutora maemail aya, uchishandisa DODR kuongorora iyo drive / disk kwawakachengeta iyo PST faira munguva yakapfuura.
Kana kana iwe usina PST faira iri muruoko, semuenzaniso, iwe fomati yako yese diski / dhiraivha, iwe unobvisa zvachose iyo PST faira, kana rako rakaomarara diski / dhiraivhu rakatyoka uye haugone kuwana iyo PST mairi pairi, nezvimwe. , ipapo unogona kushandisa DODR zvakananga.
diferencia, Disk, fambisa, ost, pst
Nei mitumbi yemamwe meseji yakadzoserwa isina chinhu?Ndeupi mutsauko pakati DataNumen Outlook Repair uye DataNumen Exchange Recovery?